2019-10-18 21:18:24 , "Business Management (Bas…
"Business Management (Basic Level) ပညာဒါနသင်တန်း"
? ရှေ့တစ်ခေါက်မှာ ဖွင့်ပေးသွားတဲ့ Basic Level တန်းလေး မမီလိုက်လို့ နောက်အတန်းအတွက် ကြိုအပ်ထားတဲ့သူများ၊
စီးပွား​ရေးဆို​င်​ရာ စီမံခန့်​ခွဲမှုကို စိတ်​ဝင်​စား​သောသူများအတွက်​ "Business Management (Basic Level) ပညာဒါနသင်တန်း" လေးလာပြီနော် … ။ ၁၀ တန်းအောင်ပြီးတဲ့သူ၊ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့သူများလည်း တက်ရောက်သင်ယူနိုင်တဲ့ အတန်းပါ။
? Business Management (စီးပွားရေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု)သင်တန်းကို တက်ရောက်သင်ယူချင်ပေမယ့် အပြင်မှာသင်ရင် သင်တန်းကြေးတွေကလည်း ဈေးကမြင့်၊ အချိန်ကျတော့လည်း အလုပ်နဲ့တိုက်နေပြန်၊ တက်ချင်ပေမယ့် မတက်ရဖြစ်နေကြတဲ့ ပညာလိုသူ မိတ်ဆွေများအတွက် ဗြဟ္မစိုရ်လူမှုကူညီရေးအသင်း(မန္တလေး)နဲ့ White Richmond Business School တို့ ပူးပေါင်းပြီး Business Management (Basic Level) ပညာဒါနသင်တန်း အမှတ်စဉ် ၂/၂၀၁၉ ကို နိုဝင်ဘာလထဲမှာ ဖွင့်လှစ်ပေးတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
? စီးပွား​ရေးဆိုင်​ရာ ​ဟော​ပြောပွဲများလည်း ထည့်​သွင်းစီစဉ်​​ပေးထားပါတယ်​။ ဒါ့အပြင်​ လုပ်​ငန်းခွင်​ ​လေ့လာ​ရေး အစီအစဉ်​များလည်း ပါဝင်​မှာ ဖြစ်​ပါတယ်​။
? သင်တန်းပြီးဆုံးပါက အတန်းချိန်မှန်တဲ့ အရည်အချင်းပြည့်မှီသူတွေကို သင်တန်းပြီးမြောက်ကြောင်း အောင်လက်မှတ် ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
??? အခုမှကြေငြာရပေမယ့် သင်တန်းသားဦးရေ ကန့်သတ်ထားပြီး ကြိုအပ်ထားတဲ့လူဦးရေ များနေပြီဖြစ်တာကြောင့် ဒီတစ်ခေါက်လည်း မတက်ရ မဖြစ်ရလေအောင် မအပ်ရသေးတဲ့သူတွေ စောစောကြိုအပ်ထားကြဖို့ မမေ့နဲ့နော် .. ။ ???
? သင်ကြားပေးမယ့် ဘာသာရပ်များကတော့
? Introduction to Business
? Introduction to Management
? Creative Thinking and Critical Thinking
?‍? သင်ကြားပေးမည့် ဆရာများ ?‍?
(Founder of White Richmond Business School)
?‍? ဦးမောင်မောင်ဦး (ဆရာဦး)
MPA, LL.B, LCCI, DBL, DIL, DIR,
DBS, PGDE, DPS, MPolS (on going)
MBA, MPA, B.C.Sc (Hons:), G.Dip.S.A,
MCSc, MBA, MPA, BA [Eng], DPS, DIR, Dip.ELT
B.N.Sc (Generic), MPA, DIR, DIM
M.B.,B.S (Ygn), MPA, DIR, DIM
M.B.B.S (Mdy), MBA (Mdy)
BDS (Mdy), MBA (Mdy), PGDE (MUFL)
Credit ECTS Holder (DHBW, Germany)
? သင်တန်းကာလ ?
နိုဝင်ဘာလ (၁၇) မှ ဒီဇင်ဘာလ (၈) ရက်နေ့ထိ ( ပိတ်ရက်မရှိ )
နေ့စဉ် ညနေ ၆ နာရီမှ ၇း၃၀ အထိ
? သင်တန်းကျင်းပမည့်နေရာ ?
၆၂လမ်း၊ ၃၃x၃၄ ကြား။
? အတန်းများအားလုံးအတွက် စာရွက်စာတမ်းကြေးနှင့် အထွေထွေကုန်ကျစားရိတ်အနေဖြင့် ငွေကျပ် (၁၅,၀၀၀) ကျပ် ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး သင်​တန်းပြီးဆုံးပါက ပိုငွေအားလုံးကို လူမှုကူညီရေးအသင်းများသို့ လှူဒါန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ် … ။ ?
လျှောက်လွှာတင်ရန်အတွက် အောက်ပါကျောင်းလိပ်စာသို့ Passport ပုံ တစ်ပုံဖြင့် လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။
? စာရင်းပေးသွင်းရန် ?
☎ 09-400400352, 09-964003521
This entry was posted in Training and Class on 2019-10-18 by admin.
← 2019-10-15 13:14:56 , #ယ​နေ့ကမ္ဘာ့ရွှေဈေးအလားအလာ(XAUU… 2019-10-22 15:10:28 , 100% Free Class လေး ရယူဖို့ (… →